जीवन अझै खडा गर्दैन, र विभिन्न कारण मान्छे, लामो समय को लागि आफ्नो कार मा बाहिर छ। कसैको काम लामो यात्राको समावेश छ। रुचि जो कसैले शहर टाढा एक सप्ताह मा दिन। यो विमानस्थल मौज मा अरोचक घण्टा पूरा वा stuffy रेल ढुवानी मा मिलाउ गर्न आवश्यक छैन, यो सुविधाजनक छ: धेरै आमाबाबुले कार मा साना बच्चाहरु संग यात्रा गर्न रुचाउँदैनन्। यो पनि तपाईं कहाँ त्यहाँ सार्वजनिक परिवहन समस्या हो यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। यी अवस्थाहरूमा, त्यहाँ वाहन मा खाना संरक्षण गर्न आवश्यक छ। हल्का भएको चुरोट देखि शक्ति कूलर बैग - यो मानक सकेट को अभाव मा एक महान विकल्प हो।
स्वतः रेफ्रिजरेटर: प्रकार
आवेदन र सञ्चालन आवृत्ति आधारमा, उपयुक्त उपकरण चयन गर्न सम्भव छ। निर्माता, कार मालिक विभिन्न विभाग, कार फ्रिज विभिन्न प्रयोगको लागि जारी को प्राथमिकताहरू दिइएको: पोर्टेबल फ्रीजर विशाल stolitrovye कन्टेनर, साना थर्मस सहज, र रेडियो मा निर्मित संग चुरोट लाइटर उपकरणबाट काम। आफ्नो आधारभूत प्रकार विचार गर्नुहोस्:
नरम थर्मस - सबैभन्दा सरल ठंडा उपकरणहरू।580 लिटर देखि - विभिन्न आकारहरू र आकार, यस्तो उपकरणहरू को मात्रा मा उत्पादित गर्दै छन्। झोला-संचालित फ्रिज लाइटर को चुरोट सामग्रीहरू ठंडा सक्षम छ भने, यसको सापेक्ष कारण इन्सुलेट पत्र उत्पादनहरु को प्रारम्भिक तापमान समर्थन गर्दछ। प्रकृति आक्रमण को लागि, खाना र पेय पदार्थ को यातायात लागि उपयुक्त।
Thermo कन्टेनर: फारम बक्समा ठूलो thermoses। तिनीहरूले बिजुली आवश्यक छैन तिनीहरू सजिलो र पूरा गर्न सुविधाजनक छन्। तिनीहरूले सामग्रीहरू शांत छैन, तर बस मूल तापमान कायम।5150 गर्न लिटर उपलब्ध मात्रा।
हल्का भएको चुरोट देखि शक्ति Thermoelectric कूलर बैग: तथाकथित "Peltier प्रभाव", यो पत्ता जो फ्रान्सेली वैज्ञानिक पछि नाम मा आधारित छ ठंडा। बाहिरबाट प्रदर्शन र कूलर मार्फत dissipated उत्पादनहरु देखि गर्मी। ठंडा को डिग्री वातावरण मा निर्भर गर्दछ। फ्रिज कोठामा मा तापमान र बाहिर मा फरक भन्दा बढी छैन 200सी यसलाई थप गर्ने कोठामा राख्नु निम्न तीन डिग्री सामग्रीहरू, शान्त गर्न आवश्यक छ भने एक चिसो accumulator।
खुम्च्याउने Autorefrigerator। यो केवल एक ठंडा झोला छैन। यस लाइटर चुरोट वा कार ब्याट्री सक्षम स्थिर उत्पादन देखि संचालित -180सी यो परिवार को सानो गर्न फ्रिज 10 लिटर लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। 100-110 लिटर को ठूलो मात्रा लागि, यात्री खण्ड वा ट्रंक मा खाली सीट छ गर्न आवश्यक हुनेछ। यो नकारात्मक उच्च मूल्य र ब्याट्री राख्न छोटो समयको लागि क्षमता छ।
आफ्नो मूल्य, आकार, मा ब्याट्री प्रभाव र ठंडा क्षमता - - उत्पादित मोडेल को विशेषताहरु आधारित यो कूलर बैग, लाइटर चुरोट अवरोध बिना संचालित कि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो स्पष्ट हुन्छ। धेरै मोडेल ठंडा र ताप मा चल्न सक्छ। तिनीहरूले550 लिटर देखि मात्रा मा उत्पादित गर्दै छन्, र एक्लै यात्रा परिवार र मान्छे रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्यामेरा राम्रो, डिजिटल वा दर्पण छ?
फाराम र प्रकाश प्रणाली
घटक वक्ताहरु DLS B6A
सौर कलेक्टर - उपकरण र प्रकार
कसरी बच्चाहरु को लागि एक गद्दा चयन गर्न: सुझावहरू
लुना समूह: निर्माण, रचना, शैलीको इतिहास
कि ओठको आकार आफ्नो चरित्र बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ?
एशियाली नदी। एशिया को प्रमुख नदीहरू
Sinusitis लागि उपाय। "Sinuforte" sinusitis लागि उपाय। sinusitis संग Rinsing
"वोल्वो 960" व्यापार वर्ग: प्राविधिक विशेषताहरु, लाभ र बेफाइदा